Aya Nakamura ayaa ka tagay xirfad ku dabaasha muusigga! - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Aya Nakamura ayaa ka tagay xirfad ku dabaasha muusigga!
Aya Nakamura ayaa ka tagay xirfad ku dabaasha muusigga!
Wareysi lala yeeshay majaladda ELLE, Aya Nakamura ayaa ka hadashay nolosheeda xirfadeed. Ma ogtahay in fannaankii asal ahaan loo go'aamiyay xirfad ciyaareed?
Aya Nakamura waa qaab wanaagsan tan iyo abid. Turjumaanka "La Dot" wuxuu ku saabsan yahay inuu soo bandhigo safarkiisa, "Nakamura". Munaasabadda, waxay u tagtay majaladda ELLE wareysi dheer, waxayna ku soo noqotay xirfadeeda dhalinyaradeeda.
Sida dhalinyaro ah, Aya Nakamura wuxuu ahaa cayaar aad u weyn. Waxay ku dhaqantay dabaasha. Marka la eego xarumaha ELLE, heesaha ayaa qiray in ay ka maqan tahay xirfadlaha kubada cagta: "Xiriirka Dabaasha ee Faransiisku wuxuu doonayay in uu ii soo galo tartamadaWaxay sharraxday, iyada oo intaas ku dartay: "caajis. Waxaan bilaabay in aan jeclaado soosaarista, waana sida mar kasta qoyan. "
Haddii Aya Nakamura uu seegay biladii Olympic-da, haddana waxay ku faani kartaa inay noqoto rikoor labadaba ah. Run ahaantii, heestiisa album «NakamuraWuxuu u gudbiyay in ka badan 200 000 nuqullada ... Qaab ciyaareed qaali ah!
Dhanka kale, turjumaanka "Pookie"Shirarka Concha. SafarkiisaNakamura"Horey ayaa ufaraxay guul weyn, tan iyo dhowr qol oo dhameystiran ... Fannaankii 22 sano ayaa ka dhacay 30 Maarso Marseille iyo 31 March ee Olympia!
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://www.culturebene.com/50119-aya-nakamura-a-abandonne-une-carriere-en-natation-pour-la-musique.html
MICHELLE OBAMA waxay qabanaysaa bandhigga Faransiiska!
Youtube: WACS. Nantes-PSG: Soo hel dumarka ciyaartoyda labada kooxood sawirada